नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : मुलुकको संबैधानिक जटिलताको व्याख्या र भोली के हुन्छ भन्ने बारे राजनीतिक आँकलन !
मुलुकको संबैधानिक जटिलताको व्याख्या र भोली के हुन्छ भन्ने बारे राजनीतिक आँकलन !
अधिबक्ता बिष्णु भट्टराई चान्ने चुन्ने अधिबक्ता होइनन । यिनले हावादारी कुरा कहिलै गर्दैनन र यिनले जे भन्छन त्यो भएको छ मुलुकमा । यिनलाई म ज्योतिशी अधिबक्ता पनि भन्न रुचाउँछु । तर उनी ज्योतिसी बिद्यामा पूर्ण विश्वाश गर्दैनन । उनले कानुनको राष्ट्रिय अन्तरास्ट्रिय व्याख्या गरेर बुँदा बुँदा अनुसार परिस्थितीको व्याख्या र मुलुकको कानुनी र राजनीतिक नक्सा कोर्छन, देखाइदिन्छन । यिनलाई मैले २० बर्ष अघि देखी नजिकबाट चिन्छु । यिनका कुराहरु म सधैं गम्भीरताका साथ लिन्छु हेर्छु । यिनले आज यसरी मुलुकको संबैधानिक जटिलताको व्याख्या र भोली के हुन्छ भन्ने बारे राजनीतिक आँकलन गरेछन !